ALAROBIA 21 FEBROARY 2018
FANOKAFANA MASOIVOHO ANY LONDRES : Ny tsy laharam-pahamehana no mahamaika ny fitondrana
Tsy mitsahatra mitombo hatrany ny kiana mamaivay azon’ny fanjakana manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana ankehitriny fa indrindra ny tsy fahaizan’izy ireo manome lanja izay tena laharam-pahamehana ho an’ny fiainam-bahoaka. 7 septembre 2017
Ny herinandro lasa teo no naverina nosokafana indray ny masoivohon’i Madagasikara any Londres izay natrehan’ny Filoham-pirenena. Tetikasa izay tsy hitondra na inona na inona eto amin’ny fiainan’ny firenena akory, raha ny fandinihana nataon’ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena.
Tamin’ny andron’ny tetezamita dia nisy ny fampiharana ny politikan’ny fitsitsiana ka tsy maintsy nakatona tamin’izany ny masoivoho Londres. Herintaona katroka tsy ahatongavana amin’ny fifidianana anefa dia naverin’ny fitondrana ankehitriny nosokafana indray izany izay heverin’ireo mpandinika fa misy ambadika sy kajikajy politika hatrany ary heverina fa efa tafiditra ao anatin’ny lamina rehetra hiatrehana ny fifidianana amin’ny taona ho avy.
Nitondra fanazavana ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ary nilaza fa mihevitra ny mpitondra fa rehefa misokatra io masoivoho io dia ho moramora ny ahazoana vola avy any an-toerana. Nanamafy anefa ny tenany fa tsy hitondra na inona na inona akory eto amintsika io, indrindra fa eo amin’ny fiainan’ny vahoaka Malagasy. “Tsy hiteraka na inona na inona sy tsy hisy fiantraikany eto amin’ny firenena ny fifandraisan’i Madagasikara sy ireo firenena any ivelany”, hoy hatrany ny fanazavana. Miharihary araka izany fa tsy mijery afatsy izay hitazomana ny toerany ny fitondrana mijoro ankehitriny izay manao ny fomba rehetra ho enti-manatratra ny vina apetrak’izy ireo ho amin’ny taona 2018.
Tsy tazan’ny mpitondra intsony ny fahoriana lalina mianjady amin’ny vahoaka toy ny fidangan’ny vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana fa any amin’ireo tsy laharam-pahamehana no mahamaika azy ireo. Tafiditra ao anatin’izany, ohatra, ny fanamboarana ny seram-piaramanidina, fanokafana ny masoivoho vaovao, fanovàna ny vola sy ny fanovàna ny taratasy fahazoan-dalana ho lasa biometrika.
Nanambara hatrany anefa ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena fa rehefa manakatona na manokatra masoivoho tahaka izao dia tokony hojerena manokana izay tombotsoan’ny firenena sy ny vahoaka ao aminy ary mifandraika amin’ilay tetikasa. Araka ny fantatra dia fandaniam-bola mihoa-pampana ny fanokafana masoivoho tahaka izao satria ny fandaniana any amin’ireo firenena any ivelany izay efa ananan’i Madagasikara masoivoho no efa mahatratra hatrany amin’ny 45 miliara.
Nisy andian-jatovo nisoloky mba hahazo famangiana RAZANA HITA TENY AMORON-DALANA (586) 15 février 2018 Manome 72 ora ny minisitry ny Asa sy ny lalàna sosialy ireo mpiasan’ny orinasa afakaba ANTSOJAY ATAON’NY MPAMPIASA SINOA (324) 15 février 2018 Nahitana zaza sampona toka-maso ILAKA EST- VATOMANDRY (310) 20 février 2018 « Ho firenena mandroso indrindra aty Afrika i Madagasikara » ANDRY RAJOELINA (292) 19 février 2018 Olona 7 namoy ny ainy, 8 naratra mafy, trano 3 potika FIANJERANA VATO TENY AMPAMARINANA (282) 19 février 2018 Nandositra rehefa nosakanan’ny mpitandro filaminana FIARA DUSTER NAMPIAHIAHY (245) 20 février 2018